Danganronpa2နှုတ်ဆက်ပါတယ် PSP .iS စိတ်ပျက်လက်ပျက် + အုပျစုမြား [အင်္ဂလိပ် Gameplay] အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Danganronpa2နှုတ်ဆက်အခမဲ့အွန်လိုင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်မလားလို့စိတ်ဓာတ်
Danganronpa2နှုတ်ဆက်ပါတယ်လက်မှိုင်, Nice Danganronpa အဖြစ်ဂျပန်အတွက်အသိအမှတ်ပြု 2: Sayonara Zetsubo Gakuen,[ခ] Spike Chunsoft ကတီထွင်တဲ့မြင်နိုင်ဝတ္ထုခရီး On-line ကိုအပန်းဖြေဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Danganronpa ဌန်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောဒုတိယအရစ်ကျင်, နှင့်မှတိုက်ရိုက်နောက်ဆက်တွဲ 2010 အပန်းဖြေ Danganronpa: ရွှင်လန်းသောစိတ်ဖျက်ဆီးတယ်ချွတ် Set. ဒါဟာပထမဦးဆုံးဇူလိုင်လအပေါ် PlayStation ပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ဂျပန်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 26, 2012.
အဆိုပါ PlayStation Vita များအတွက်တစ်ဦးကဆိပ်ကမ်းကိုအောက်တိုဘာလအပေါ်ဂျပန်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 10, 2013 နှင့်စက်တင်ဘာလများတွင် NIS အမေရိကတိုက်အားဖြင့်မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပထဲမှာပုံနှိပ်ခဲ့သည် 2014. မိုက်ကရိုဆော့ဖမူလစာမျက်နှာနေထိုင်ရာနေအိမ်ပြတင်းပေါက်များအတွက်တစ်ဦးကဆိပ်ကမ်းကိုဧပြီလအပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 18, 2016.
အဆိုပါအားကစားမတ်လ PlayStation လေးများအတွက်ထူးခြားသောအတူဖြန့်ချိခဲ့သည် 2017.
ဇာတ်လမ်းကသူတို့ highschool ရဲ့ကျောင်းအုပ် Monokuma အားဖြင့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်ပိတ်မိနေသူကို highschool ကျောင်းမှာကျောင်းကကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးသည်ဟုဆိုကာအောက်ပါအတိုင်း, တစ်ဦး sentient ကျပ်ဝက်ဝံ. ကျွန်းထွက်သွားနိုင်စေဖို့, ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကယ့်ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အကြားတစ်ဦးကိုသတ်ပစ်သင့်တယ်, နှင့်မျှမတို့လမ်းအပေါင်းတို့၌အောက်ပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုမှတဆင့်ဖမ်းမိခံရ.
လည်းဖတ်ကြည့်ပါ:- Sparta ကို Android Apk ကို PSP iso + CSO ၏ဘုရားသခင်စစ်ပွဲ၏ဝိညာဉျတျောကို Download လုပ်ပါ [PPSSPP / PSP]
Danganronpa2နှုတ်ဆက်ပါတယ် Gameplay စိတ်ပျက်လက်ပျက်
ရုံအစောပိုင်းကအပန်းဖြေတူသော, Danganronpa2ဂိမ်း၏ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုအရေးအပါဆုံးအမြိုးမြိုး; ကောလိပ်ဘဝ, နေ့အပြီးရက်ကြာဘဝနှင့်သေစေလောက်သောဘဝကဏ္ဍများသို့တက်ကိုချိုးဖျက်သော, နှင့် Class ကိုစမ်းသပ်. အားလုံးနေ့-ပြီးနောက်နေ့ဘဝတစ်ဝက်မှတဆင့်, ဂိမ်းကစားကွက်များကလုံးဝလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်များနှင့်တိုးတက်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်. အားလုံးအခမဲ့အချိန် '' တို့ကဇာတ်ကောင်တွေနဲ့စကားပြောဆိုနေခြင်း’ ကဏ္ဍများကိုမျှော်လင့်အပိုင်းအစများကိုရရှိ, သောအတန်းအစားစမ်းသပ်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအသုံးပြုသွားမည်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်ဖလှယ်ခံရကြလိမ့်မည်. မြောက်မြားစွာ interaction ကဖျော်ဖြေသည့်ပါဝင်သူရဲ့ဒီပလိုမာမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်, အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေအားဖြင့်နောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်မှုတပ်ဆင်ရန်သူတို့ကိုခွင့်ပြု. Monocoins, ဝှက်ထား Monokuma ကိန်းဂဏန်းများရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်သင့်လျော်စွာဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့, အားလုံးအခမဲ့အချိန်အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်လုံးဝလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်ကောင်မှပေးအပ်ခြင်းခံရအံ့သောငှါလက်ဆောင်များအတွက်ဖလှယ်ခံရကြလိမ့်မည်, အမြန်အခါသမယချွတ်သတ်မှတ်ထားရန်အနေအထားအတွက်သေချာအရာဝတ္ထုနှင့်အတူ. အဆိုပါသေစေလောက်သောဘဝတစ်ဝက်, သောဥပဒေများမြင်ကွင်းတစ်ခု၏ညှနျကွားတှငျတှေ့သောအခါဖြစ်ပျက်, အဆိုပါပါဝင်သူအဆိုပါ Class ကိုစမ်းသပ်မှတဆင့်သူတို့အားလုံးကိုကူညီပေးပါမည်သည့်အထောက်အထားရှာထားပါတယ်.
အဆိုပါ Class ကိုစမ်းသပ်, ယင်းမှာဂိမ်းကစားတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏အိုင်ဒီဖြေရှင်းသင့်တယ်, ရွေးချယ်မှုအစောပိုင်းအပန်းဖြေ၏အကောင့်ပေါ်တွင်တန်းတူနှစ်ဖက်, မည်သို့ပင်ဆိုစေအသစ်များကိုဂိမ်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ. ၏ရှေ့လိုပဲ, class စမ်းသပ်မှုအဓိကအားထားသောမရပ်မနားဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ၏ငျဆငျနေကြတယ်, ယင်းမှာဂိမ်းကစားသူအပေါင်းတို့ကိုကောလိပ်ကျောင်းကကောလိပ်ကျောင်းသားများအမှတဆင့်အားနည်းအစိတ်အပိုင်းများအဘို့လိုက်ရှာ်၏’ သူတို့နှင့်အတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ရိုက်ကူး “တကယ်တော့ Bullets” သေသောသူတို့ကိုဆနျ့ကငျြ. ဤအချိန်အလင်းဆုံ, အဝါရောင်-ရောင်စုံ '' အစွန်းအကွက်စကား’ အပြာ-ရောင်စုံတို့ကပူးပေါင်းနေကြတယ် '' အစွန်းအကွက်သဘောတူ '', ဘယ်သူ့ကိုမှအလွန်တကယ်တော့ပြောနေပါတယ်ညွှန်ပြနေတဲ့လက်တွေ့ဘဝ Bullet နှင့်အတူပစ်ခတ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရာ. Hangman ရဲ့ Gambit ယခုမတိုင်မီသူတို့၏မမှန်ကန်ကြောင်းပွဲသို့ကွဲသွားရင်ပစ္စုပ္ပန်နှစ်ခုစလုံးအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်မှလာမယ့်ကိုက်ညီအက္ခရာများရောနှောဖို့ဂိမ်းကစားလိုအပ်ပါတယ်. ရောနှောထားသောစာလုံးထို့နောက်တိုင်းဖကျြဆီးခံရစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်သဲလွန်စထွက်စာလုံးပေါင်းရန်အသုံးပြု. အစောပိုင်းအပန်းဖြေထံမှ Bullet အချိန်တိုက်ပွဲသည်ယခုအခါပုံမှန်အားထိတ်လန့်ပြောဆိုမှုများကို Motion အဖြစ်လူသိများသည်, ရွေးချယ်မှုများအကြီးအကျယ်စည်းချက်အချိန်ကိုက်အသုံးချဖို့များ၏တန်းတူ mechanics ရဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်ရန်. controls ကနောက်ဆုံးစကားလုံးအပန်းဖြေရာမှအနိုင်နိုင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနေကြတယ်, နှင့်ဂိမ်းကစားယခုဝက်၏အစွန်အဖျားပေါ်တွင်သင့်လျော်သောအမိန့်ကိုဖြတ်ပြီးထားသောစာပိုဒ်တိုများအားလုံးထွက်စာလုံးပေါင်းသင့်တယ်, အနိုင်နိုင်တစ်ဦးကိုရွေးချယ် Reality Bullet ပစ်ခတ်ထက်. နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အဆိုပါပိတ်ခြင်းအငြင်းအခုံ, ယင်းမှာဂိမ်းကစားဥပဒေများ၏ညှနျကွားထဲမှာ၏အခါသမယသရုပ်ဖော်ထားတဲ့တစ်ဦးရုပ်ပြစာအုပ်က e-စာအုပ်က e-စာအုပ်ချွတ်ထုတ်ဖြည့်ပါ, ဂိမ်းကစားပြား၏ရှယ်ယာထံမှပြားကိုရွေးချယ်ကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ချိန်ညှိနေသည်, ချက်ချင်း devices များအားလုံးအားဝင်ရောက်နှိုင်းယှဉ်.
လည်းဖတ်ကြည့်ပါ:- Tekken Download6အန်းဒရွိုက် PSP သည် apk [ISO ကို + CSO]
အစောပိုင်းအပန်းဖြေဖို့တန်းတူညီမျှရဝုဏ်တွင်အောက်ပါ, Danganronpa2Hajime Hinata များအတွက်ဂိမ်းကစားတာဝန်ခံရသောသောနေရာများ, မျှသာမျှော်လင့်ချက်ရဲ့ Peak အကယ်ဒမီရဲ့လက်ကျန်အကြားတကယ်ကိုတဦးတည်းသို့လှန်ခဲ့သူတစ်ဦး amnesiac ကောင်လေး’ ကျောင်းကကျောင်းကကောလိပ်ကျောင်းသားများကို, တဆယ်ကိုအခြားသူများနှင့်အတူ. အဆိုပါပညာရှင်များမိမိတို့စွပ်စွဲချက်သင်တန်းဆရာအားဖြင့်ဝေးလံသောအပူပိုင်း Jabberwock ကျွန်းခေါ်ဆောင်သွားဖော်ထုတ်, သေးငယ်တဲ့, Usami အမည်ရှိယုန်ကဲ့သို့ mascot, သူတစ်ဦးလွယ်ကူသောကိစ္စခရီးဖြစ်ဖို့ကဆိုပါတယ်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အချက်များမျှော်လင့်ချက်ရဲ့ Peak အကယ်ဒမီရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောသို့လှန်, Monokuma, ကွညောခသူတို့တဦးတည်းကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းသား homicide နှင့်ဝေးရလိမ့်မယ်သည်အထိထိုသူအပေါင်းတို့ဖြစ်ရပ်များများအတွက်ကျွန်းပေါ်တွင်ဖမ်းမိပါတယ်. ပညာရှင်များကိုတစ်ဦး Class ကိုစမ်းသပ်နေတဲ့လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖြေရှင်းနိုင်လျှင်, ကြောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူကွပ်မျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်, သို့ရာတွင်အဖြစ်မကြာမီသူတို့ချို့ယွင်းချက်ယူဆချက်စေအဖြစ်, တခြားလူတိုင်းသေထောင်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းထို့နောက်လူသတ်သမားနေအိမ်သို့အခမဲ့လမ်းလျှောက်.
အကြံပြု Post ကို :
Dante ရဲ့ငရဲမီးက Android ကို PSP / PPSSPP Download (iso + CSO) အပြည့်အဝဂိမ်း
How To Play Danganronpa2နှုတ်ဆက်ပါတယ် PSP စိတ်ပျက်လက်ပျက် – Danganronpa2သွားတော့မယ် စိတ်ပျက်အားငယ်ဒေါင်းလုပ်
အဆိုပါအပန်းဖြေ မှစ. Play နှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန.
DOWNLOAD DANGANRONPA2နှုတ်ဆက်ပါတယ် PSP က ISO Apk စိတ်ပျက်လက်ပျက်
Android အတွက် du မြန်နှုန်း Booster v2.1.2 နောက်ဆုံး APK ကို
Prisma APK ကို v2.5 ကို Download လုပ်ပါ: ဖိုင်အရွယ်အစား: 5.42ကို MB
Temple Run2APK ကို '' မီးလောင်တွင် Sands’ အဖြစ်အပျက်
ရုံးတင်စစ်ဆေး Extreme4v1.0 ကို Android Apk နောက်ဆုံးဂိမ်း (ဗားရှင်း) အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် MyJio ချုပ် APK ကို v3.2 | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Candy Crush Saga v1.69.0.6 Apk Game က Download [cheat + Mod] အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းများအတွက်
သင် ... ရမည် လော့ဂ်အင် မှတ်ချက်ပို့စ်တင်ရန်.
Pokemon TCG ကအွန်လိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
ဝင်္ & ပိုများသော APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့…
3: D ရေကူးကန် Ball ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့…
APK ကိုဒေါင်းလုပ် Wordscapes – အခမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို GAME…
ရီးရဲလ်စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ Download (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး, န့်အသတ်ပိုက်ဆံ) …